News - Insulation Resistance Testester ဆိုတာဘာလဲ
Insulation Resistance Tester ဆိုတာဘာလဲ
Insulation Resistance Tester အမျိုးမျိုးသောလျှပ်ကာပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးနှင့် Transformers၊ Motors, Cables, Electrical Equipment နှင့်စသည်တို့၏ insulation Resistance ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Insulation Resistance Tester ၏ Output Short-Circuit Current သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
တာရှည်ကြိုးများ၊ အကွေ့အကောက်များသောမော်တာများ၊ ထရန်စဖော်မာများစသည်တို့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများ၏ခံနိုင်ရည်ကိုတိုင်းတာသောအခါ, insulator တွင်လည်းခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်သူ၏ Output Short-Circuit ကိုလက်ရှိအဆိုပါ output ကိုအဆိုပါ Megger ၏မြင့်မားသောဗို့အားအရင်းအမြစ်များ၏ပြည်တွင်းခုခံထင်ဟပ်နိုင်။ ။
ပိုမိုမြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်ပြင်ပ“ G” အဆုံးသတ်ကိုအသုံးပြုပါ
ပြင်ပရှိ“ G” Terminal (Shielding Terminal) ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုင်းတာမှုရလဒ်များတွင်စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိစိုထိုင်းမှုနှင့်ဖုန်မှုန့်များ၏သြဇာကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောခုခံမှုကိုတိုင်းတာသောအခါရလဒ်များတည်ငြိမ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါကအမှားများကိုဖယ်ရှားရန် G Terminal ကိုအသုံးပြုခြင်းအားသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
တိုင်းတာခြင်းခံနိုင်ရည်အပြင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုပ်ယူအချိုးနှင့် Polarization ကိုအညွှန်းကိန်းတိုင်းတာသင့်သလဲ
Insulation Test တွင်၊ အချို့သောအချိန်တိုင်းတွင် Insulation Resistance Value သည် Test Sample ၏ Insulation Function ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုအပြည့်အ ၀ ရောင်ပြန်ဟပ်။ မရပါ။ တဖကျတှငျ, တူညီတဲ့ function ကို၏ insulator တွင်လည်းပစ္စည်းကြောင့်, အသံအတိုးအကျယ်ကြီးမားသည့်အခါ insulator တွင်လည်းခုခံပေါ်လာ, နှင့်အသံအတိုးအကျယ်သေးငယ်သည့်အခါ insulator တွင်လည်းခုခံပေါ်လာ။ ကြီးမားသည် အခြားတစ်ဖက်တွင်, မြင့်မားသောဗို့အားကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကာကှယျပစ္စည်းတာဝန်ခံစုပ်ယူမှုအချိုး (DAR) လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် polarization ကို (PI) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှိပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်အီလက်ထရောနစ် insulator တွင်လည်းခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်သူပိုမိုမြင့်မားသော DC High Voltage ထုတ်လုပ်နိုင်?
DC ပြောင်းလဲခြင်း၏နိယာမအရဘက်ထရီများစွာ အသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်နစ်ကာကွယ်ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်သူအား Booster Circuit မှလုပ်ဆောင်သည်။ Lower Power Supply Voltage သည်ပိုမိုမြင့်မားသော Output DC Voltage သို့တိုးလာလိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်ထားသော High Voltage သည်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း Output Power သည် ပို၍ နိမ့်သည်။
Insulation Resistance Tester အသုံးပြုရန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
၁။ တိုင်းတာမှုမလုပ်မီ Insulation Resistance Tester တွင် Circuit နှင့် Short Circuit Test ပြုလုပ်၍ Insulation Resistance Tester ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ။ သီးခြားစစ်ဆင်ရေးမှာဆက်သွယ်မှုရှိသော Wires နှစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ Swing Handle ၏ Pointer သည် Infinity ကိုညွှန်ပြသင့်သည်။ ထို့နောက် Connection Wires နှစ်ခုကို Short လုပ်ပေးပါ။ Pointer သည်သုညသို့ညွှန်ပြသင့်သည်။
၂။ စမ်းသပ်နေသောကိရိယာသည်အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံရမည်။ တိုင်းတာမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးရန်စစ်ဆေးသောကိရိယာသည်အပြည့်အဝအားသွင်းရမည် (မိနစ် ၂ မှ ၃ မိနစ်ခန့်) ။
(၃) Insulation Resistance Tester နှင့်စမ်းသပ်နေသည့် Device ကို Wireless တစ်ခုဖြင့်ခွဲ ထား၍ သီးခြားဆက်သွယ်သင့်သည်။ Circuit ၏ Surface သည်သန့်ရှင်းပြီးခြောက်သွေ့နေသင့်သည်။ ဝါယာကြိုးများအကြားညံ့ဖျင်းသော insulation ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်။
၄။ လှုပ်နေစဉ်စမ်းသပ်မှုအတွင်း Insulation Resistance Tester ကိုအလျားလိုက်အနေအထားတွင်ထားပါ။ Handle လှိမ့်သောအခါ Terminal Buttons များအကြားတိုတောင်းသော Circuit အားခွင့်မပြုပါ။ Capacitors နှင့် Cables များကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ Crank Handle လှိမ့်သောအခါ Wiring အားဖြုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက Reverse Charging သည် insulation Resistance Tester ကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
၅။ Handle ကို Swing လုပ်သောအခါ၎င်းသည် ပို၍ နှေး။ မြန်ဆန်ပြီး ၁၂၀r / Min သို့အညီအမျှအရှိန်မြှင့်သင့်ပြီး Electric Shock ကိုကာကွယ်ရန်သတိပြုပါ။ The Swing လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Pointer သည်သုညသို့ရောက်သောအခါစောင့်ကြည့်နေသည့်ကွိုင်သို့အပူနှင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန် Swing ဆက်လက်မပြုလုပ်နိုင်တော့ပါ။
၆။ စမ်းသပ်ဆဲကိရိယာ၏ယိုစိမ့်မှုအားတားဆီးရန်အလို့ငှာကာကွယ်မှုစမ်းသပ်သူကိုအသုံးပြုသောအခါစမ်းသပ်ဆဲရှိကိရိယာ၏အလယ်အလတ်အလွှာ (ဥပမာ Cable Shell Core အကြားအတွင်း insulation ကဲ့သို့) အကာအကွယ်လက်စွပ်နှင့်ချိတ်ဆက်သင့်သည်။
၇။ စမ်းသပ်နေသောကိရိယာများ၏ဗို့အားပေါ် မူတည်၍ သင့်လျော်သောလျှပ်ကာကာကွယ်နိုင်သောစမ်းသပ်ကိရိယာကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ Volt ၅၀၀ အောက်ရှိသော Rated Voltage ပါသောပစ္စည်းကိရိယာအတွက် Volts 500 Volts သို့မဟုတ် 1000 Volts Of Insulation Resistance Tester ကိုရွေးချယ်ပါ။ Voltage 500 အထက်နှင့်အထက်ရှိသည့် Rated Voltage ရှိသောပစ္စည်းအတွက် 1000 မှ 2500 Volts ၏ Insulation Resistance Tester ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါအတိုင်းအတာစကေး၏ရွေးချယ်မှုမှာတော့ဖတ်အတွက်ကြီးမားသောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများ၏ insulator တွင်လည်းခုခံတန်ဖိုးကိုအလွန်အကျွံကျော်လွန်စေရန်မသတိထားသင့်ပါတယ်။
လျှပ်စီးရာသီဥတုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဗို့အား conductor များနှင့်အတူအနီးအနားရှိပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုင်းတာရန် Insulation Resistance Testers များအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးပါ။
post အချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ -06-2021
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, ဗို့အားမီတာ, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး